Ọkọlọtọ eriri laser laser igwe
-Dị igwe ejiji laser zuru ezu
Tube Fiber Laser tingcha Machine
Mgbanwe igwe eji agbanye ahihia oria osisi
Desktype plasma cnc cuts igwe
Gantry ụdị cnc ịkpụ igwe
Gantry plasma flame cnc ọnwụ igwe
Igwe ihe mkpocha plasma cant abụọ
Gantry kwụ ọtọ eriri ọkụ cnc ịkpụ igwe
Gantry pipe plate Integrated plasma flame cnc ọnwụ igwe
Nnukwu Ọrụ Plasme Ire ọkụ CNC Cut Cut Machine
Ngwá agha ọhụrụ maka ọnụ ụzọ ọla na windo-laser ịcha igwe
site na nhazi na 20-08-31
Omenala ndị mepere emepe na windo dị oyi na dull. A na-etinye ihe ndị na-ekpo ọkụ laser n'ime ihe ịchọ mma ụlọ, nke na-eme ka ọnụ ụzọ na windo na-agbanwe agbanwe, na-enye ndị mmadụ obi ụtọ! Metal laser ọnwụ igwe na ọtụtụ-eji metal nhazi ụlọ ọrụ ...
Kedu ka arụmọrụ nke igwe laser si arụ ọrụ nke ọma?
N'oge nhazi ihe na ọrụ mmepụta, iji mezuo ihe ndị a chọrọ ngwaahịa, ọ dị mkpa ka ebipụ ihe dị iche iche na nkọwa ụfọdụ ka ha wee jiri ha rụọ ọrụ mmepụta ọzọ. Ya mere, n'ime ọrụ mmepụta na nhazi ndị a, ọ dị mkpa ...
Kedu ihe ndị dị mma maka ịkpụpu ngwa ịkpụ laser laser?
Igwe igwe ejiji laser a maara nke ọma bụ igwe ejiji kachasị ewu ewu na 21st narị afọ. N'ihi ngwa ọrụ ya dị iche iche na arụ ọrụ ike ya, e jirila nwayọọ nwayọọ webata igwe ịchafụ laser na nnukwu ụlọ ọrụ, yana ngwa ya gụnyere…
Kedụ ihe na-eme ka ngwa belata ịkpụkpọ laser nke igwe ịkpụzi igwe laser?
Nhọrọ nke ngwa ngwa igwe na-egbutu laser metal dị ezigbo mkpa mgbe ị na-egbutu ihe. Ọ bụrụ na ọsọ dị oke oke, n'agbanyeghị etu ihe si dị mma, ọ ga-emetụta mmepụta ahụ. Ọ bụrụ na ọsọ dị ọsọ ọsọ mana a na-achụ aja dị mma, ọ dị ntakịrị karịa ọnwụ. N’ezie, igwe la…
Kedu ụdị igwe igwe nwere ike igbutu ya
Mmepe nke sayensị na teknụzụ ga-eweta ọtụtụ ihe ọhụrụ, na mpaghara dị iche iche, a ga-enwe ọtụtụ nkwado ị nwere ike ịnye, ọkachasị ugbu a na ọtụtụ igwe ọrụ, na-emekwa maka mmepe nke sayensị na teknụzụ ewetala mma. na - aga n'ihu, nke a bụ v ...
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị nrụpụta na-amalite ịchụso igwe ejiji laser
site ha na 20-08-06
Site na mmepe na agam n’ihu nke sayensi na teknụzụ, ndụ ndi mmadụ na agba ọsọ n’etinye ọsọ ọsọ. N’oge ego a, ndụ ndị mmadụ na ọrụ ha amalitela ịchọ ọrụ na ịdị elu, igwe akụrụngwa ịpị laser nwere ike izute arụmọrụ dị elu na izi ezi…
Kedu ihe bụ ụkpụrụ ọrụ igwe eji egbutu plasma
site ha na 20-05-30
A na-eji igwe ịkụ plasma CNC eme ihe ugbu a n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche ma na-ejikwa ya eme ihe. Ọtụtụ ndị nrụpụta na-achọ ịgbanwe site na usoro nhazi ọdịnala na njikwa ọnụọgụ, melite arụmọrụ nhazi ma belata ụgwọ ọrụ, mana aghọtaghị akụrụngwa, wha ...
Etu ị ga - esi nweta igwe ịcha laser na - elekwasị anya, 50% nke ndị ọrụ amaghị!
site ha na 20-05-21
Dị ka anyị niile maara, laser ọnwụ igwe nwere na-enweghị atụ uru nke ịcha metal mpempe akwụkwọ. Ọ bụghị naanị na enwere usoro ịkpụzi elu, kamakwa nwere akụkụ obe mara mma na enweghị burr. Ọ nwere ike nweta nsonaazụ ọma ma ọ na-egbutu nnukwu efere ma ọ bụ obere efere, na mmetụta ndị a niile nwere laser c ...
Nkà nka eji eji igwe egbugbi igwe
site na nhazi na 20-04-21
Mpempe ọkụ na-agbaze igwe nke igwe nwere nnukwu okpukpu okpukpu carbon steel, obere ịbelata ọnụ ala, ngwa kachasị na carbon steel, nnukwu mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara CNC plasma cut machine, CNC Flame cut igwe igwe. D ...
Youghọtara iwu ọrụ nke igwe na-egbute ire ọkụ igwe
Igwe ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ nwere nnukwu ọkpụrụkpụ nke ikike ikuku carbon, na ọnụahịa mbelata dị ala, ya mere ọtụtụ ndị na-emepụta nhazi ígwè nabatara ya. Shandong Buluoer ọkachamara na R&D, n'ichepụta, ire na ọrụ nke akụrụngwa laser, akụrụngwa ịgbado ọkụ, CNC…
Cakpachara anya mgbe igwe na-egbutu laser na-ebipu mpempe akwụkwọ
site na nhazi na 20-01-06
Mgbe ị na-eji akụrụngwa laser laser, mbepụ dị nso na ebe a na-elekwasị anya dịtụ mma. You maara ka elekwasị anya nke igwe ọnwụ laser? Nzọụkwụ mbụ nke ịkpụ bụ ịchọta ezigbo ọnọdụ na-elekwasị anya, nke bụ isiokwu nke mmadụ niile nwere mmasị na ya. Nke mbu…
Co2 laser ịcha igwe
Adress:Nke 666 Fengnian Av., Mingshui Economic Mpaghara, Mpaghara Zhangqiu, Jinan City, Shandong, China